Torohevitra 8 hahitana ny hotely lavorary | Vaovao momba ny dia
Maria | | zavatra ilaina, Tsangatsangana
Raha resaka fitsangatsanganana dia misy olona te-hijanona amin'ny hotely afovoany. Ny sasany kosa aleony mijanona amin'ny hotely any ambanivohitry ny tanàna lehibe, amin'izay afaka milamina kokoa izy ireo. Ny sasany hisafidy efitrano lehibe ary ny sasany ho an'ny toerana maloto izay ananan'izy ireo fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpiara-miasa aminy. Ary noho izany dia afaka mahita fitambarana isan-karazany nomen'ny miova am-polony isika.
Ohatra, ny fahatsapana fahatsapana fahatsapana ho ao an-trano amin'ny dia lavitra, trano fandraisam-bahiny afovoany akaikin'ny toerana fizahan-tany rehetra, manao laharam-pahamehana ny fitsaharana sy ny fiononana na manana teti-bola tery kely na kely kokoa hamandrihana efitrano iray.
Indraindray, ny fitadiavana trano fandraisam-bahiny arak'izay ilaintsika dia mety ho sarotra raha misy ny tolotra lehibe misy. Noho izany, amin'ny lahatsoratra manaraka, hanome torohevitra vitsivitsy ianao hahitanao ny hotely mety.
1 Karazana fitsangatsanganana
2 Manapaha hevitra momba ny kilasy fampiantranoana
3 Manisa kajy
4 Manome naoty ny fotodrafitrasa
5 Sakafo mandritra ny dia
6 Zahao ny hevitry ny mpampiasa hafa
7 Mamandraha mialoha
8 Ny lazan'ny marika
Rehefa manomboka dia na fialan-tsasatra dia tsy maintsy mazava amintsika ny zavatra tadiavintsika avy aminy. Fitsangatsanganana an-trano sa fitsangatsanganana ara-kolontsaina? Handeha irery ve isika mpivady na manan-janaka? Hitady hotely misy lohahevitra na trano lafo vidy?
Amin'izao fotoana izao, ny tolotra hotely dia samy hafa be ka saika mifanaraka amin'ny drafitra rehetra. Ohatra, raha mitady trano fandraisam-bahiny any Lisbonne isika dia mety aleontsika ilay foibe raha te hahita ireo tsangambato isika, fa hankany ivelany izahay raha mitady fialan-tsasatra, fa amin'ny halaviran'ny tanàna.
Manapaha hevitra momba ny kilasy fampiantranoana
Talohan'izay dia ny nijanona tao amin'ny hotely na trano fandraisam-bahiny ihany no safidy tokana. Ankehitriny dia misy karazany hafa kokoa ary azonao atao ny misafidy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano, hotely, trano ambanivohitra, trano fandraisam-bahiny, B & B na trano fandraisam-bahiny. Ny karazana fampiantranoana tsirairay dia manolotra serivisy samihafa mifanaraka amin'ny teti-bola sy izay ilainay.
Na dia tianay rehetra aza ny mijanona ao amin'ny Burj Al Arab any Dubai, miaraka amin'ireo kintana 7 mahavariana, dia lafo vidy izay azon'ny paosy vitsy azo atao. Noho izany, rehefa manomana dia ianao dia mila mijery ny zava-misy ary fantaro izay teti-bola ananantsika ary ohatrinona no azo omena trano.
Raha vantany vao nofaritanao izay tianao holaniana dia azonao atao ny manafoana amin'ny fikarohana ireo hotely lafo loatra ireo ary koa ireo izay mora vidy loatra izay tsy mitaona fahatokisan-tena.
Manome naoty ny fotodrafitrasa
Raha vantany vao fantatsika ny karazan-trano hipetrahanay mandritra ny alina mandritra ny dia, dia tsy maintsy ampitahainay ny tombony azon'ny tsirairay amin'ny trano hipetrahana.
Raha mitady haka aina isika aorian'ny dia sarotra ataontsika, dia angamba mila spa sy gym isika. Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy kely ianao, dia ho fanampiny ny efitranon'ny lalao.
Sakafo mandritra ny dia
Misy ny olona aleony mivoaka hisakafo sy hahafantatra ny gastronomy mahazatra an'io toerana io mandritra ny fotoana ijanonany. Ny sasany kosa misafidy ny hihinana any amin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny hotely mba hisorohana ny dia tsy ilaina ary hanararaotra ny zava-misy fa maro no manolotra serivisy fitandremana bebe kokoa ary miaraka amin'ny lovia be pitsiny kokoa. Raha ny marina dia tsy hafahafa intsony ny mahita chef be mpitia miara-miasa amin'izy ireo.
Zahao ny hevitry ny mpampiasa hafa
Efa fantatray izay faritra tianay hitoerana, ohatrinona ny vola laninay, inona ny serivisy tadiavinay ary raha te hihinana ao amin'ny hotely izahay, nefa mbola tsy hainay izay hofidiana. Amin'izay dia mety hanampy ny mamaky ny hevitry ny mpampiasa hafa amin'ny tranokala manokana ary miantehitra amin'ny rafitra fanamarihana kintana an'ny firenena manokana.
Sary | CR7 Hotels
Raha misy fisehoan-javatra tsy ampoizina mitranga alohan'ny datin'ny dia tsy vitanao, na mahita tolotra tsara kokoa fotsiny izahay ary te hanova hotely, dia tsy maintsy jerentsika ny politika fanafoanana ny trano fandraisam-bahiny. Amin'ny tranga maro dia maimaim-poana izany raha mbola foanana ny famandrihana miaraka amina fe-potoana malina, mazàna eo anelanelan'ny 24 sy 48 ora.
Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampiasa an'io tombony io hamandrihana ireo trano fandraisam-bahiny amin'ny vidiny tsy mampino herinandro maromaro mialoha ary amin'ny fiadanan-tsaina ny fahafantarana fa azo foanana ny famandrihana raha tsy vita ilay dia amin'ny farany.
Ny lazan'ny marika
Misy rojo hotely sasany izay nanangana laza nandritra ny tantarany. Noho io antony io dia mety hampisy fahatokisan-tena bebe kokoa ny famandrihana efitrano ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » zavatra ilaina » Torohevitra 8 hahitana ny hotely lavorary
Trano fisakafoanana hafahafa 5 any Tokyo